newBrandAnalytics na-ewepụta Pulse, Real-Social Social Intelligence | Martech Zone
newBrandAnalytics na-ebupụta Pulse, Real-Time Social Intelligence
ọhụrụBrandAnalytics (nBA) amalitela usu, igwe ojii nke dabeere na igwe ojii na-enyere ndị ahịa aka dịka McDonald's, Bridal David, DICK's Sporting Goods na ụzọ ụgbọ oloko na-enweta ọhụhụ oge dị n'ime isiokwu na mkparịta ụka na-emetụta ụdị ha na nghọta ngwaahịa.
Pulse gụnyere elekọta mmadụ na-ege ntị software nke na-achịkọta okwu na mkparịta ụka nke ọ bụla, na-enye data na-ewu ewu ma na-enye ohere ka ika ahụ meghachi na ezigbo oge. Pulse nwere njirimara ato doro anya:
Nchọpụta mbụ na usoro ịdọ aka ná ntị - Pulse na - akpaghị aka na - eziga ozi iji mata nsogbu ma ọ bụ mkparịta ụka mmekọrịta mmekọrịta dị mma tupu ha amalite ịrịa; hụ na a gwara gị na ike isiokwu na-enweghị mkpa iji aka gị nyochaa osimiri ika gị nke faili ntanetị.
Olu mpi olu nyocha - Pulse na-ewere njirimara isiokwu otu nzọụkwụ n'ihu site na ịkọwapụta usoro na ịkọwapụta nchọta iji soro ndị otu otu kesaa.
Udo-nke ojiji na nchikota zuru oke - Pulse bụ onye ọrụ-enyi na enyi ma na-agwakọta n'ime onyinye nBA dị ugbu a, na-esi na foto mmekọrịta mmadụ na ibe ya gaa nyocha ahịa nke ndị ahịa zuru ezu yana atụmatụ atụmatụ ime ụlọ.
Pulse na-enye ezigbo oge ịdọ aka ná ntị na nkọwapụta ndụ site na iji ọkwa a na-ahụkarị, ịchụso usoro intra-day, na ike geo-tagging.
Pulse bụ akụkụ nke sọftụwia'BrandAnalytics 'ọhụrụ. NBA usoro azịza zuru oke gụnyere Insight, nke na-enye nghọta mpaghara na njikwa aha njirimara n'ịntanetị; Uru, nke na-elekwasị anya na ọgụgụ isi asọmpi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na itinye ego nyocha mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji tie ndị asọmpi gị aka; Jikọọ, nke bụ usoro ikpo okwu maka itinye aka na ntanetị n'ịntanetị; na ntabi, nke na-enye ezigbo oge ndị ahịa na-akọ nlekota mbipụta. Pulse ga-adị maka ụdị bidoro na July.
N’akụkụ ụlọ ọrụ niile, azụmaahịa chọrọ sọftụwia ọgụgụ isi nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke nwere ike ịnye ezigbo oge, nghọta na arụmọrụ nwere ike ịkọwa. Pulse na-enye ndị ahịa anyị ikike ị gabiga ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji nye nsonaazụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na azịza akwadoro, ahaziri maka akara ha. Kristin Muhlner, onye isi oche nke NewBrandAnalytics
Tags: ahịanchọpụta mbụNBAọhụrụbrandanalyticselekọta mmadụ mataọgụgụ isi mmadụnlekota oruusoro ịdọ aka na ntị ọhaolu ọgọ analysis
Echiche ofgha 6 nke Ekekọrịta Egwuregwu
2014: Afọ nke Ahụmịhe Ndị Ahịa